Lahatsoratra nataon'i Michael Grigsby ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Michael Grigsby
Mike Grigsby dia nirotsaka tamin'ny siansa marketing nandritra ny 25 taona mahery. Talen'ny fikarohana momba ny varotra izy Millward Brown ary nitana ny toeran'ny mpitarika ao amin'ny Hewlett-Packard sy ny Gap. Miaraka amin'ny fanandramana be dia be amin'ny asa aman-draharaha lohalaharana amin'ny siansa momba ny varotra sy ny angona angon-drakitra, izy izao no mitarika ny fampiharana ny fandanjalanjana stratejika stratejika ao Targetbase.
Alarobia, Jolay 22, 2015 Talata, Jolay 21, 2015 Michael Grigsby
Ka te hahafantatra hatrany ny fomba fampandehanana ny marcom (serasera marketing) isika, na amin'ny maha fiara na amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny tsirairay. Amin'ny fanombanana ny marcom dia mahazatra ny mampiasa fitsapana A / B tsotra. Ity dia teknika iray anaovana santionany tsy an-kanavaka sela roa ho an'ny fitsaboana fampielezan-kevitra. Ny sela iray dia mahazo ny fitsapana ary ny sela hafa kosa tsy hahazo. Avy eo ny tahan'ny valiny na ny fidiram-bola dia ampitahaina amin'ireo sela roa. Raha mihoatra ny sela fanaraha-maso ny sela fanandramana